अनौठो प्रेम विवाह १५ वर्षको बेहुला, ७३ वर्षीया बेहुली • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
अनौठो प्रेम विवाह १५ वर्षको बेहुला, ७३ वर्षीया बेहुली
इन्डोनेसिया । प्रेममा उमेरको छेकवार हुँदैन भनिन्छ । यो उक्तिलाई इन्डोनेसियाको एक जोडीले चरितार्थ गरेका छन् । १५ वर्षका एक बालकले ७३ वर्षीया बृद्धासँग प्रेम विवाह गरेर यो उक्तिलाई चरितार्थ गरेका हुन् । यी दुबैबीच केही वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध चुलिएको थियो । विवाह गर्न नपाउँदा दुबैले आत्महत्याको धम्की दिएका कारण कानून विपरीत पनि यो जोडीलाई विवाहका लागि अनुमति दिइएको बताइन्छ ।
समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार १५ वर्षीय सेलामत रियादीलाई मलेरिया भएको थियो । पिता गुमाएका उनलाई छिमेकी महिला रोहाया बिनती मोहम्मद जकफरले बिरामी अवस्थामा निकै हेरचाह गरेकी थिइन् । आमाले दोस्रो विवाह गरेपछि घरमा एक्लो भएका सेलामतलाई बिरामी अवस्थामा हेरचाह गर्न छिमेकी बृद्धा रोहायाले कुनै कसर बाँकी राखिनन् । यहीँबाट उनीहरुबीच प्रेम सुरु भएको हो । रोहायाले यसअघि दुई पटक विवाह गरिसकेकी छन् । उनका एक सन्तान रहेको बताइएको छ ।